Canada Myanmar: 2008
ခရစ်စမတ် အထူး လက်ဆောင်
" ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မှူ၏ "
( ခရစ်စမတ်ဆိုသည်မှာ ပေးဆပ်ခြင်း၏ ပုံသက်သေ ဟူ၍လည်းယူဆ၍ ရနိုင်ပါသည် )
ဤကမ္ဘာမြေပေါ် ရှိ သက်ရှိ သတ္တ၀ါ တိုင်းသည် အသက်ရှင်သန်နေနိုင်ရန်အတွက် နီးစပ်ရာ ဆက်
စပ်ရာ သို့ မဟုတ် မိရှိးဖလာ အလိုက် အစား အစာတခုခုကို စားသုံးကြရသလို အဆင့် အမြင့်ဆုံး
သတ္တ၀ါဖြစ်သည့် လူသားများသည် ခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်နေယုံသာမကပဲ ၀ိညာဉ် ရေးရာဆက်လက်
ရှင်သန်နေနိုင်ရန်အတွက် ဘာသာတရားတခုခုကို မိရိုးဖလာအလိုက်ဖြစ်စေ ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်
၍ ဖြစ်စေ ကိုးကွယ်ဆီးကပ်ပူဇော်ပသ တပ်ကြလေ့ ရှိသည် ။
ထိုသို့ ကိုးကွယ်ကြရာတွင် ကယ်တင်သောအရှင် မစသောအရှင် သို့ မဟုတ် လမ်းပြသောအရှင်
စသည့် ကြီးမြတ်သော ထူးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ် တို့ ကိုတို့ ကို ပူဇော်ဆီးကပ်ကိုးကွယ်ကြလေ့ ရှိရာ
အဘယ်အရာသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူသနည်း အဘယ်ကြောင့် ထိုသူကို ကိုးကွယ်ဆီးကပ်ကြရ
ပါနည်း ၊ ထိုကိုးကွယ်သင့် သောပုဂ္ဂိုလ်သည် အခြားသောသူများထက် အဘယ်သို့ ထူးခြားနေ
သင့် ပါသနည်း စသည့် မေးခွန်းများကို မိမိကိုယ်မိမိ မေးမြန်းရန် လူအများစုတို့ သည် မေ့လျှော
နေတပ်ကြပေရာ ရှူဒေါင့် တခုမှနေ၍ အချို့ ကျမ်းချက်များကို ကိုးကား၍ဝေငှ လိုက်ပါသည် ။
" Whoever does not love does not know God, because God is Love " ( 1 John
4:8 ) တွင် " ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိသောသူသည် ဘုရားသခင်ကိုမသိ ၊ အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်
သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ ။ " ( ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်း စာမျက်နှာ ၃၁၇ ၊ ရှင်ယောဟန်သြ၀ါဒစာ
အခန်းကြီး ၄ ၊ အခန်းငယ် ၈ ) တွင် ဆိုထားပေသည်
ထိုအခါ မေတ္တာဆိုသည် ကိုကျမ်းစာက အဘယ်သို့ ဆက်လက်ဖွင့် ဆိုထားပါသနည်း ဟု
လေ့ လာကြည့် သော် " Love is patient, Love is kind. It does not envy, it does not boast,
it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no
record of wrongs. ( 1 Corin 13:4-5 ) " ငါ့ ၌ မေတ္တာမရှိလျှင်အကျိုးမရှိ ၊ မေတ္တာသည် စိတ်ရှည်
တပ်၏ ၊ ကျေးဇူးပြုတပ်၏ ၊ မေတ္တာသည် ဂုဏ်ပြိုင်ခြင်းမရှိ ၊ ၀ါကြွားခြင်းမရှိ ၊ မာန်မာနမရှိ ၊ မလျှောက်
ပတ်စွာမကျင်တပ် ၊ ကိုယ်အကျိုးကိုမရှာတပ် ၊ ဒေါသအမျက်မထွက်တပ် ၊ အပြစ်ရှိသည်ဟုမထင်တပ်
မတရားသောအမှူ၌ ၀မ်းမြောက်ခြင်းမရှိတပ် ၊ သမ္မာတရား၌ ၀မ်းမြောက်တပ်၏ ခပ်သိမ်းသောအရာ
တို့ ကိုဖုံးအုပ်တပ်၏။ " ဟုဆိုထားပေသည် ။
ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်း လူသားခြင်းမေတ္တာပြကူညီကြရန် ဤသို့ 
မိန့် မှာခဲ့ ဘူးပါသည် ။ " A new command I give you: Love one another . As I have Loved
you, so you must love one another." ( John 13:34 ) " သင်တို့ သည် အချင်းချင်း တယောက်
ကို တယောက် ချစ်ကြလော့ ။ ငါသည် သင်တို့ ကိုချစ်သည့် နည်းတူ အချင်းချင်းချစ်ကြလော့ ဟုပ
ညတ်သစ်ကိုငါပေး၏ " ဘုရားသခင်သည် လူအများတို့ ကိုအဘယ်ကဲ့ သို့ ချစ်ကြခဲ့ ပါသနည်း ၊ ချစ်
ရန်တိုက်တွန်းမိန်မှာခဲ့ ပါသနည်း ဟု ကျမ်းစာများ၌လေ့ လာကြည့် ပြန်သော် ..
( ၁ ) စွန့် ကြဲ ပေးကမ်းကူညီခြင်း
( ၂ ) စွန့် လွတ်အနစ်နာခံကူညီခြင်း
( ၃ ) စွန့် စား ကယ်တင်တော်မူခြင်း
စသည့်စွန့်၃ စွန့် ကို အဓိကထားကူညီလမ်းပြ သွားကြောင်း ကြမ်းစားများတလျှောက်တွေ့ ရှိရ
လူသားအချင်းချင်း လူမျိုးအချင်းချင်း မိမိရောက်ရှိရာ နေထိုင်ရာ မွေးဖွားရာ ပတ်ဝန်းကျင်
တွင်မိမိတပ်နိုင်သည့် ဖက်များမှ ကူညီကြရာတွင်
( ၁ ) အချိန်ပေးကူညီခြင်း
( ၂ ) ငွေပေးကူညီခြင်း
( ၃ ) အကြံ ပေးကူညီခြင်း
( ၄ ) သတိပေးကူညီခြင်း
( ၅ ) လုပ်အားပေးကူညီခြင်း
( ၆ ) ဆုတောင်း ကူ ညီခြင်း
စသည် ဖြင့် မိမိတပ်နိုင်သည့် ဖက်များမှ တပ်နိုင်သလောက် အနစ်နာခံကူညီကြခြင်းသည် မင်္ဂလာ
ရှိသော လုပ်ရပ်များဖြစ်ကြောင်း ဘာသာတရားတိုင်းက လက်ခံထားကြပေသည် ။ လူတိုင်းသည်
မပြည့် စုံ ခြင်း အလျှင်းရှိသည့် အလျှောက် တပ်နိုင်သလောက် အကောင်းမြင်ဝါဒ ဖြင့် သာ သဘော
ထားကြီး မေတ္တာပြ သဘောထားကြီး ကူညီ အနစ်နာခံကြရန် ကြိုးစားသင့် ပေသည် ။
ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသားအများစုကလေးစားကြရသော နိုဘယ်ဆုရှင်ပုဂိုလ်ကြီးများ
ကမ္ဘာကျော်ပုဂိုလ်ကြီးများကိုအနည်းစပ်ဆုံးလေ့ လာကြည့် ကြမည် ဆိုလျှင် သူတို့ ၏ ပညာမြင့် မား
တပ်မြောက်ခြင်း ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝကြခြင်း ၊ သြဇာအာဏာမြင့် မား ခြင်းတို့ ကြောင့် မဟုတ်ကြပဲ
ထိုသူနှင့် ဆက်ဆိုင်သော လူအများစုအတွက် အဘယ်မျှ အနစ်နာခံ ကိုယ်ကျိုးစွန့် စွန့် စားလုပ်
ဆောင်ခဲ့ ကြသည် ဆိုသည် ဖြင့် သာအများသဘောတူတိုင်းတာ လေးစားကြလေ့ ရှိ့ ကြောင်း
တွေ့ မြင်ကြရပါသည် ။ အခြားအရည်အချင်းများကြောင့် အထင်ကြီးချင်ကြီး ကြပါလိပ်မည် ၊ ကြောက်
ရွံ့ ချင်ကြောက်ရွံ့ ကြပါလိမ့် မည် သို့ သော် နောက်ကွယ်တွင် မလေးစားတပ်ကြပါ ။ လူအများ၏
စစ်မှန်သောအလေးစားခံရတပ်မှူသည် အဘယ်မျှအနစ်နာခံခဲ့ခြင်းဖြင့် သာ တိုက်ရှိက်အချိုးကြ
လျှက်ရှိကြောင်းရိုးရှင်းစွာ တွေရပေသည် ။
သို့ သော်ထိုသူအများစုတို့ သည် အလေးစားခံခြင်၍ အနစ်နာခံပြကြခြင်းမဟုတ်ကြ
ပဲ မိမိတို့ ၏ ၀ါသနာ ၊ စေတနာ ၊ အနစ်နာ တို့ နှင့် မခံခြင်စိတ် တို့ ၏တွန်းအားများကြောင့် သာ
တဖြေးဖြေး ၀င်ရောက် ပတ်သက်လာကြရကြောင်း တွေ့ ရတပ်ပေသည် ။ ထိုအနစ်နာခံ ဦး
ဆောင်လိုစိတ်အများစုတို့ သည် ပြည်သူ အများစုအပေါ် မေတ္တာ၊ စေတနာ ထားမှူများမပေါက်
ဖွားလာတပ်ပေရာ မေတ္တာသည်သာ အမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ ရပေသည် ။
သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ ။ " ဟုသာဖေါ်ပြလိုပါသည်
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင် ဘာသာတရားတိုင်း၌ အစွန်းရောက်ဝါဒီများရှိတပ်ကြ
သလို။ အ ကောင်းအဆိုး အားနည်းချက်အားသာချက် နှင့် လူအမျိုးစုံ တို့ ကို ဒွန်တွဲ၍ဘာသာတိုင်း၌
တွေ့ ရှိနိုင်ကြပေရာဘာသာတရားအားလုံး၏ ဘုံ လေးစား ထိုက်သော တူညီသော အမြင့် မြတ်ဆုံး
သော အရာသည် ကား Love ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်ကြောင်း ရိုးသားနိမ့် ချစွာ ဝေငှလိုက်ရပါသည် ။
" Qualities ofaLeader "
" Patience, Vigilance and industry, Liberality , compassion and hope-these are the qualities
ofaleader; these the qualities that should be wished for by the righteous. "
နာယကဂုဏ် ၆ ပါး
" ထကြွ နိုးကြား သနား သည်းခံ ဝေဖန် ထောက်ရှူ ဤခြောက်ခု ကြီးသူ ကျင့် ဝတ်သာ ။ "
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:21 a.m.2comments: Links to this post
အဖက်ဖက်ရှူ့ ဒေါင့် များနဲ့ 
အနားမညီ ဗဟုဂံကတစ်ခု ။
ရုံမတင်သော ကပွဲများ ။
အပြုံးအမဲ့ နဲ့ 
ကဲ့ ရဲ့ ရှုတ်ချရင်း
လည်ပတ်နေမည့်ကမ္ဘာမြေ ။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 1:17 a.m. 1 comment: Links to this post
* c ၊ ပ ၊ ဂ နှင့် ၁ *
အလည် မှာ င
ဘက်စုံ မှ ကြည့် 
ရှိသည့် သန်တန် မတူပြန်ဘူး
သူ ငယ် ချင်း ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:14 a.m. 1 comment: Links to this post
VOICE FROM THE DARK EARTH
The world is rounding
on his pole…..
But some parts were
They are trying to dawn..
If you love human rights…
If you like rightness….
If you have sympathy
for the oppressed ….
If you have compassion….
for these humans in darkness.
Giveavoice to
freedom from fear….
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 7:25 p.m. No comments: Links to this post
အချစ်ရဲ့ အဆုံး အမုန်း
အပြုံးရဲ့ တဖက် အမဲ့ 
ကဲ့ ရဲ့ ခြင်းဆိုတာ
အခါခါမချီးမွမ်းနိုင်တော့ လို့ ပါ
ရောက်ခဲ့ ပြီးတဲ့ အခါ
နားလည်ခဲ့ ရပါပြီလေ....။ ။
( ချီးမွမ်းခုနှစ်ရက် ၊ ကဲ့ရဲ့ ခုနှစ်ရက်အား ဖွဲ့ ဆိုပါသည် )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:52 a.m. No comments: Links to this post
ဒီမို ဘာလဲ ဘယ်လဲ
၈၈ မှဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကြီးစပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပရှိမြန့် မာပြည်သူတွေကြားထဲမှာ အဓီကအုပ်စု
( ၁ ) ပြည်သူမှစစ်မှန်စွာရွေးချယ်တင်မြှောက်သော အစိုးရတစ်ရပ်မြန်မာပြည်အတွက်ပေါ်ပေါက်သင့် ပြီဟု
ယူဆသော ပြည်သူများ ။
( ၂ ) ဘယ်သူတွေကမိမိကိုဘယ်လိုစံနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စေ မခံစားတပ်၊မခံစားလို
( ၃ ) မှားသည်မှန်သည်ကိုသိသော်လည်းတိုက်ရိုက်သော်၎င်း၊သွယ်ဝိုက်၍သော်၎င်းပတ်
သက်ဆက်စပ်အကျိုးခံစားနေရ၍ မျက်စေ့ မှိတ်ကျားကန်ထောက်ခံနေကြရသောပြည်သူများ၊အုပ်ချုပ်သူများ ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အာဏာကို ဆက်လက်ဆုတ်ကိုင်ထားရန်လိုအပ်နေသေးသောသူများ
မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေး မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းခဲ့ ကြသော ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း
တဦးနှင့် တဦးနားလည်ခန့် မှန်းသုံးသပ်ရန် မခဲရင်းလှပါ ။
( ၁ ) ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ(၀ါ)စစ်မှန်သောပြည်သူ့ အစိုးရကိုလိုလားသောမြန်မာပြည်သူများသည် နံပါတ်တစ်အများ
ဘ၀ပျက်အသက်အသေခံအနစ်နာခံရဲ့ ဝန့် စွာပြင်းထန်စွာတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေသူများမှအစပျော့ပျောင်းညင်သာစွာဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ကြသည့် 
ပြည်သူများအလည် နောက်ကွယ်မှ နည်းမျိုးစုံဖြင့်ထောက်ခံအားပေးနေသူများအဆုံးအားလုံးပါဝင်ပါသည် ။
ထိုသူတို့ သည် ဒီမိုကရေစီရသွားလျှင်၊ စစ်အစိုးရပြုတ်ကျသွားလျှင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးနေ့ တွင်းညတွင်းခြင်း
ချမ်းသာလာတော့ မည် ပြည်သူတို့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သော ဒီမိုကရေစီအစိုးရသည် သန့်ရှင်း
မြင့် မြတ်စဉ်ကျယ်သော ခေါင်းဆောင်များချက်ခြင်းရလာလိမ်မည်ဟုမျှော်လင့် မထားကြပါ။
စစ်အစိုးရလုပ်သမျှတစ်ခုမှမကောင်း စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အားလုံးရက်စက်ရုတ်မာ
ဒီမိုကရေစီအခြေခိုင်ခန့် နေပါပြီဆိုသော ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံကြီးများတွင်ပင်လျှင် အစိုးရထဲမှချစားမှူများ
မတရားမှူများရှိနေတယ်ပါသေးသည် သေနပ်ပြောင်းဝ မှအာဏာကို ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းဖက်
တွယ်ထားသော ပြည်သူ့ အာဏာကိုမလေးစားသော အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်လည်း အတုယူ
နဲ့ အများဖေါက်ပြန်တယ်ပါတယ် ဖေါက်ပြန်နေမှာပါပဲ ရာထူးအကြီးအသေးအလိုက်ပေါ့ 
တိုင်းပြည်တခုဟာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ တရားမျှတခြင်းကို ဘယ်လောက်ထိမ်းထားနိုင် သလဲဆိုတဲ့ အချက်က
ထိုတိုင်းပြည်နဲ့ ထိုပြည်သူတွေအတွက် အခြေခံကျပါတယ် အုပ်ချုပ်သူတွေဘာလုပ်လုပ် မျက်စေ့ မိတ်ပြီးမကောင်း
ထိုင်ပြောနေမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဟာတော်လှန်ရေးမဟုတ်ပါဘူး သူတို့ လုပ်မှအောင်မြင်မယ် ၊ ငါတို့ လုပ်မှ
အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ ငါစိတ် လွန်ကဲခြင်းဟာလည်း ထွက်ပေါက်မရှာနိုင်သော ပြည်သူအများစုနှင့် မျက်နှာငယ်
နေသောတိုင်းပြည် နစ်နာရုံမတပါးအခြားကောင်းကျိုးမရှိနိုင်ပါ ။ မြန်မာပြည်သားတိုင်းအဖြစ်မှန်ကို ရိုးသား
စွာမြင်တပ်ဖို့ လက်ခံတပ်ဖို့ အရေးကြီးပါသည် ။ မြန်မာပြည်သူပြည်သား တဦးချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခြင်း ၊ တရားမျှတခြင်း နဲ့ အခြေခံလူ့ 
အခွင့် အရေးတွေကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်အချိန်မှာ အာမခံချက်ပေးနိုင်မှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မိမိဖာသာ စိတ်အေးအေးထားပြီးတဦးချင်းစီအနေနဲ့ ဖြေ
ကြည့် ကြရအောင်ပါ ။ ဒါဟာယနေ့ ကမ္ဘာလူမှူအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ တိုင်းနိုင်ငံတိုင်း ပြည်သူတိုင်းအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပါ
အဲဒါတွေရှိလာမှတဦးချင်းစီရဲ့ ကျိုးစားမှူတွေဟာညီမျှစွာအရာထင်လာပြီး တိုင်းပြည် တခုလုံး လူမျိုးတမျိုးလုံး
အဆင့် ဆင့် တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ီဒီမိုကရေစီစံနစ်သည်သာ တစ်ခုတည်းသောတိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးကိုတိုးတက်စေသောစံနစ်တခုဟုကျွန်တော်
တပ်အယ်မပြောလိုပါ သို့ သော် သူအလိုအလျှောက်ဖြစ်နေသောအစိုးရ ( သဘာဝပေါက်ပင်အစိုးရ) မျိုးများ
သည်မနေခောတ်ကမ္ဘာနှင့် မကိုက်ညီတော့သည်မှာသေချာပါသည်။ ဒါကိုစိတ်ထဲကကြိတ်၍သဘောပေါက်နား
လည်နေသောစစ်အစိုးရများ၊ တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်လိုက်ရပါသည် စိတ်မချသေး၍ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းထား
ရပါသေးသည်ဆိုသောအစိုးရခေါင်းဆောင်ကြီးများနိုင်ငံကြီးများသည် အကင်းပါးစွာဖြင့် မသိမသာပြောင်းလွဲ
လွတ်လပ်မှူများကို လျှောပေါ့ ပေးလာရသည်ကို တရုတ် ၊ ရုရှ ၊ ကျုးဘား ၊ စသည့်နိုင်ငံများတွင်ထင်ရှားစွာတွေ
မြင်နိုင်ပေသည် ၊ အာဏာရှင်ဆန်သောလေသံများဖြေးညှင်းစွာပပြောက် လာသည် ၊ သို့ သော် မိမိပြည်သူများ
ကို တပ်နိုင်သမျှ ကမ္ဘာကြီးနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားနေဆဲဖြစ်သည် ။
ထို အလိုအလျှောက်ဖြစ် အစိုးရများသည် သေနတ်ပြောင်းဝမှအာဏာကို ဗြောင်မသုံးရဲတော့ ပဲ မျက်စေ့ ပွင့် 
နေသောပြည်သူများကို မျက်စေ့ မပွင့်နေသောပြည်သူများဖြင့် လှဲ့ တိုက်ပေးသောနည်းဗျူဟာကိုတဖက်လှည့် 
သုံးစွဲလာခဲ့ သည် ။ အမှန်တရားကို သူတို့ နားလည် ၏သို့ သော် တပ်နိုင်သမျှ ၊ ဖြစ်နိုင်သမျှ ၊ ကြာနိုင်သမျှ သူ
တို့ ထိမ်းချုပ်ထားချင် အချိန်ဆွဲထား ကြဦးမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ကွယ်မှ သေနတ်ကိုင် ပြီးကလိန်စေ့ညာဏ်ဆင်၍ အာဏာဆုပ်ကိုဖက်တွယ်ထားကြမည့် အစား ပြည်သူ
လူထုစင်မြင့် ရှေ့ မှောက်ပေါ်သို့ ရဲဝန့် စွာရင်ကော့ တက်လာပြီး မဲဆွယ်စီးယုံး ၍ ခေါင်းဆောင်နေရာကို ထိုက်
တန်စွာရယူ ကြစေလိုပါသည် ။
ကမ္ဘာာပေါ်ရှိထို အလိုအလျှောက်ဖြစ် အစိုးရများသည် ဝေဖန်တပ်သောပြည်သူများနှင့် သတင်းမီဒီယာများကို
နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဖိနိပ်ဟန့်တားလေ့ ရှိသည် မိမိတို့ ၏သတင်းများကိုလည်း အာဏာသုံ၍နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဖြန့်ချီမိုင်း
တိုက်လေ့ရှိသည် အဘယ်ကြောင့် ထိုတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် ဟုအတင်းအဓမ္မခံယူထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အဝေဖန်မခံရဲရပါသနည်း မီဒီယာများကိုပိတ်ဆို့ ထားရပါသနည်း ကမ္ဘာနှင့် ပြည်သူကို မျက်ချေဖြတ်ရပါသနည်း
ဆိုသည့် အဖြေကို တိုင်းပြည် ၏အခြေခံလူတန်းစားများမှအစ အသိပညာအတပ်ပညာရှင်များအဆုံး တဦးချင်းစီ
ယနေ့ ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစု ( အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေကိုထားပါဦးတော့ ) သည် ( ဥပမာ အိမ်ဒိယ ၊ ထိုင်း ၊ စင်္ကာ
ပူ၊ ဖိလိပီး ) နိုင်ငံအများစု၏အစိုးရနှင့် ပြည်သူဆက်ဆံရေးကိုပြည်တွင်းမှ ပြည်သူများလေ့ လာရန် အခွင့် အရေး နည်း ပါး သည့် ကြားမှ လေ့ လာကြည့် ကြစေလိုပါသည် ရာနှုံးပြည်ကောင်းမွန်သောစံနစ်ဟုမဆိုလိုပါ အားနည်း
ချက်အားသာချက်များစွာ ရောပြွန်းနေသေးလင့် ကစား ပြည်သူတို့ ၏လွတ်လပ်ခွင့် ၊ ကမ္ဘာမှပြည်သူနှင့် နိုင်ငံအ
စိုးရကိုလေးစားအသိအမှတ်ပြုမှူ အတွေးခေါ် ပညာရေးနှင့် ကမ္ဘာကြီးကိုလွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်နိုင်ခွင့် တို့ သည်
တရုပ် ၊မြောက်ကိုရီးယား ၊ မြန်မာစသည့် နိုင်ငံတို့ နှင့် ယှဉ်လျှင် လွန်စွာကွာခြားကြောင်း သိသာလှပါသည် ။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများသည်သာ ကောင်းသည့် အစိုးရစံနစ်ဖြစ်သည် မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ထပ်ခါတလည်း
လည်း သတိပေးလိုပါသည် သို့ သော်မည်သို့ ဆိုစေ ယနေ့ ခေတ်ကမ္ဘာကြီးတွင် မိမိမမွေးခင်ကပင် အလိုအ
လျှောက်ဖြစ်နေပြီးဖြစ်သောအစိုးရမျိုး ၊ အတင်းအဓမ္မဖြစ်ထွန်းလာသောအစိုးရမျိုး လက်နှက်အားကိုးဖြင့်ရွေး
ချယ်ခံခဲ့ ရသောအစိုးရမျိုး ၊ ဘုရင်စံနစ် စစ်အာဏာရှင် စံနစ် ဆန်ဆန်အစိုးရမျိုးများသည် တဖြေးဖြေး ပြောင်း
လွဲ ပပြောက်လာကြသည်ကို ရိုးသားစွာဝန်ခံကြပါစို့ ။
လူမျိုးချင်းအတူတူ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် တောင်ကိုရီးယား ဘာကြောင့် တိုးတက်မှူကွာခြားလာရတာလဲ ဂျပန်
နဲ့ တရုပ်အောင်မြင်တာတူရင်တောင် ကမ္ဘာကလက်ခံတာ မြင်တာဘာကြောင့်မတူကြတာလဲ ၊ ရိုးသားစွာစဉ်း
စားကြရအောင်ပါ ၊ ပဒေသရဇ် ခေတ်ကာလတွေမှာ ဘုရင်တွေ သားစဉ်မြေးဆက် ကံကောင်းယုံနဲ့ အုပ်ချုပ်ကြ
တာမျိုး ၊ ကမ္ဘာစစ်ကာလတွေမှာ စစ်တပ်ကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ကြရတာမျိုး မဆန်းပေမဲ့ယနေ့ ခေတ်ကမ္ဘာကြီး
မှာ မြန်မာစစ်တပ်အခန်းကဏ္ဌဘယ်နေရာမှာရှိသင့် ပါသလဲ ၊ ကမ္ဘာက လေးစားဆက်ဆံအသိအမှတ်ပြုလာ
ဖို့ ဘာတွေလိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ ၊ ကမ္ဘာကလူရာမသွင်းရင် ရေရှည် ပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံဘာတွေဖြစ်လာမ
လဲ ( ဒီနေရာမှာလူဦးရေများနေသောတရုပ်ကိုတုမိုက်၍မရပါ )၊ လူတိုင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည် ၊ ဒါဆို ယနေ့ 
စစ်တပ် လာလုပ်နေသလဲ့ ၊ ဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘယ်လို ဦးတည်ချီလှမ်းနေသလဲ ၊ အတိုက်အခံတွေ
အပေါ်တရားမျှတမှူရှိသလော၊ ပြုစုပြိုးထောင်အားပေးမှူရှိသလော၊ ဒီအဖြေတွေကို မိမိဖါသာ မိုင်းတိုက်မခံ
ပဲ လွပ်စွာ သဦးချင်းစီဖြေကြည့် ကြပါ ၊ ဒါဆိုရင် တိုင်းပြည်လူမျိုးအတွက်ဘယ်ဘက်ကရပ်တည်တာမှန်တယ်
ဆိုတာ မိမိသမိုင်းကိုမိမိလိပ်ပြာလုံပါလိမ့် မယ်
ယာရီ အရှုံးအနိုင်သည် အခြေအနေအချိန်အခါအရပ်ရပ်ပေါ်တွင်ရပ်တည်နေသဖြင့် အဓိကမကြပါ မိမိ စိတ်
ဓါတ် ယုံကြည်ချက် သန့် စဉ်မှူသာလျှင် သမိုင်းမျိုးဆက်တွေက မှတ်ကျောက်တင်သွားပါလိမ့် မည်
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:21 a.m. 1 comment: Links to this post
ဒို့ တတွေ ရှောင်တိမ်းလာတာ
မ ဆ လ တဲ့ စွပ်စွဲ
အဲဒီလူ ဟာ သူလျှို
မရှိပါစေနဲ့ ...။ ။
( ၁၉၉၀ ရိုးမ၏ရှိုက်သံများ ကဗျာစာအုပ်မှ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:00 a.m. No comments: Links to this post
သိ ကြား မြင်လည်း
ဘာများတပ်နိုင်ဦးမည် နည်း..။ ။
( စိတ်ကောင်းရှိသော တပ်မတော်အရာရှိကြီးများသို့ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 1:06 a.m. No comments: Links to this post
အားအင် အပြည့် နဲ့ အတူ
၈၈ ရဲ့ သူရဲကောင်းများအတွက်
၉ ရက် အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲ
ကိုးရက် ကိုး လ ကိုး ဆယ့် ကိုး
အစပျိုးတဲ့ တိုက် ပွဲ
ယခုခေတ်ရဲ့ အာဇာနည်များ။ ။
( ကိုးလေးလုံး နေ့အထိမ်းအမှတ် အဖြစ်မျက်ခင်းပြင်ပေါ် မှ
ငြိမ်း ချမ်း စွာ အစာငတ်ခံ ထိုင်သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြ
သွားခဲ့ ကြသော သူရဲကောင်းများသို့ အမှတ်တရ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:27 p.m. No comments: Links to this post
( ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရွန်တိုမြို ထုတ် မြန်မာ့ စောင်း စာစောင်မှ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 2:55 a.m. No comments: Links to this post
ရဲ ရင့် မှူ....။
အဖြူလွာ တစ်ခုဖြစ်၏ ။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:09 a.m. No comments: Links to this post
လမ်းသလားသူလဲ ရှိရဲ့ 
ဘုမသိ ဘမသိပေမဲ့ 
ရဲ ရဲ လျှောက်
သူနောက် ငါ့ နောက်နဲ့ 
ရောက်တဲ့ နေရာ မှာ
ဒါ .... တော်လှန်ရေးပဲ...
ရဲ ရဲ လျှောက်....။ ။
(၁၉၉၃ - ထိုနယ်မြေ၏နောက်ဆုံးနေ့ များ ကဗျာစုမှ)
သင်၏တော်လှန်ရေးနယ်မြေသာဖြစ်၏ ။ )
တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်တွင် အဓိက M ခြောက် လုံး လိုအပ်သည်။
( ၁ ) Money ငွေကြေးအင်အား
( ၂ ) Material ရုပ်ဝထ္ထုပစ္စည်းများ
( ၃ ) Men power လူအင်အား
( ၄ ) Managements စီမံခန့် ခွဲ မှူ
( ၅ ) Movement လုပ်ရှးမှူ
( ၆ ) Mind Power စိတ်ဓါတ်အင်အား
လက်ရှိ အချို့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများ၏ လှုပ်ရှားမှူများတွင်
( ၇ ) Mine ဖေါက်ခွဲရေး ( အချို့ နိုင်ငံများတွင် တွေ့ ရသည် )
အချို့ နိုင်ငံတော်လှန်ရေးများတွင် Mine ( ဖေါက်ခွဲရေး ) များကိုပါတွေ့ ရှိရပါသည် ။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 4:48 p.m. No comments: Links to this post
စစ် ငြိမ်း ကိုယ်
( စစ် ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ကိုယ် တို့ အကြောင်း ဆောင်းပါးမှ )
ဒါပေမဲ့ငါ သူ့ ကို ကြိုက်တယ်
သူဟာငါနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ သူပဲ....
သူနဲ့ ဆိုရင်တော့ 
ငါ ရောက်ကောင်းရောက်သွားမယ်ပေါ့ 
ငါဟာမင်းကိုချစ်ခဲ့ ပေမဲ့ 
ရက်စက်တဲ့ မင်းရဲ့ လက်ချောင်းကလေးတွေပေါ်မှာ
အခါခါ ကြွေခဲ့ ဘူး
မင်းကို မေ့ လိုက်ပြီအချစ်...။ ။
( ၂၁၊ ၈၊၉၂ ရိုးမရိုက်သံများ ကဗျာစာအုပ်မှ )
( ၁၉၉၃ ထိုနယ်မြေ၏နောက်ဆုံးနေ့ များ ကဗျာစာအုပ်မှ )
စစ်ကိုယုံသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြတ်နိုးသောကျွန်နုပ်တို့ သည်
ပြစ်မှတ်တူ လက်နှက်ကွဲ တိုက်ပွဲများ
ဖြင့် အမြဲ လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟု...
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 7:30 p.m. 1 comment: Links to this post
( ၄ ရက် ၂ လ ၁၉၉၂ တနင်္လာနေ့နံက် ၄ နာရီ )
( ထိုနယ်မြေ၏နောက်ဆုံးနေ့ များ စာအုပ်မှ ) ( ရဲရဲတွေး၊ရဲရဲရေး၊ရဲရဲပြေး ကဗျာစာအုပ်မှ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 3:44 a.m. 1 comment: Links to this post
ဦးတည်ချက်မဲ့ တဲ့ 
ရင်ဆိုင်မှူကင်းမဲ့ တဲ့ 
အနစ်နာခံမှူကင်းမဲ့ တဲ့ 
ရိုးစဉ်းမှူကင်းမဲ့ တဲ့ 
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:35 p.m.3comments: Links to this post
ဒဿန ဥတုရဲ့ 
အမှန် အမှားတို့ 
ကွဲအက်စေသတည်း... ။ ။
( အမှန်တရား၏ ပန်းပွင်းများ မြန်မာပြည်တွင် ဝေဆာလှပစွာပွင့် ဖူးစေရမည် )
အားလုံး အမြန်လွတ်မြောက်ကြပါစေဟု ,အမှောင်တိုက်ထဲမှ ဘ၀တူများ မျိုးဆက်သစ်များသို့ 
( အမှေင်တိုက်မှကဗျာများ စာအုပ်မှ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:19 a.m. No comments: Links to this post
နစ်ခဲ့ တဲ့ ဆူး....
အမြစ်တွယ်ဆဲ မနုပ်ရဲလို့ 
ကြွေတော့ ရာသီ နာရီတွေပြောင်း
အသဲအိမ်စူးနစ် တဆစ်စစ် နဲ့ 
နုပ်ပြစ်ဖို့ လည်း ဒို့ မရဲ လို့ 
ဒို့ အသဲ လည်း ကြွမ်းတော့ မယ်....
1997 , June , မဟေသီမဂ္ဂဇင်းမှ
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 7:32 p.m.3comments: Links to this post
သံသယ ဘီလူး ..
သံသယ ဘီလူး .... ( ကဗျာပုံပြင်)
( ကဗျာပုံပြင်ပြီး၏ 19** )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:16 p.m. No comments: Links to this post
( ၉ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ချုပ် အစီးအဝေးမှ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:56 p.m. 1 comment: Links to this post
သွေးနဲ့ စပေမဲ့ 
( ရိုးမရင်ခုံသံ ကဗျာများစာအုပ်မှ )
အခြေအနေရဲ့ တောင်းဆိုမှူ့ 
ှူကြေင့် တော်လှန်ရေးဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာရတာ
တော်လှန်ရေးတိုင်းမှာပေးဆပ်မှူရှိတယ် ဘာမဆိုတရားတယ် မတရား မှူ ကို မတရားမှူ့ နှင့် တုန့် ပြန်ရင်တောင်မှ တရားတယ်..
ဆူး စူး ၍ ပင်
အပ် နှင့် ထွင်သည်
အသင် ဘာပြောချင်သနည်း...။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:43 p.m. 1 comment: Links to this post
ပုံ ဆောင် မဲ့ ပန်း
မမိခင် လူရိုး မခိုးခင် လူ ကောင်း
အတိတ်ကသူ ဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ပါ ။
မှားယွင်းမှူဟာ ၀ါသနာ မဟုတ်
စာနာမှူသရုပ် ခွဲ လူထဲ ကလူမှာ
အကြာင်းရင်းရှာ အမှားမှာ ဒဏ်ရာ တွေ့ 
မနေ့ ကလူကောင်း ပြောင်းလွဲ ခဲ့ ပစ္စု ပန်မှာ
သူဟာလူဆိုး ရိုးသားမဲ့နံနက်ဖန်ဟာ
မင်္ဂလာပဲ ပေါ့ ။
ရိုးသားမှူတဲ့ပုံဆောင်မဲ့ ပန်းကလေး
အရမ်းမမွှေးနဲ့ပန်းကလေး
ကြွေသွားတပ် တယ် ။ ။
( ရေသည်ပုံဆောင်မဲ့ အရာဝထ္ထုတခုဖြစ်၍ ရောက်ရှိနေသောခွက်၏
ပုံသဏ္ဌာန်အတိုင်းလိုက်၍ ပြောင်းလွဲ တည်ရှိနေ ရသည် )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:51 p.m.3comments: Links to this post
ရဲဝန့် စွာရင်ဆိုင်မှူတဲ့ 
ဝေတော့ မဲ့ ပန်းကလေးတွေ
သူတို့ ကြောင့် ပဲ မဟုတ်လား...။
ရှည်လျှားတဲ့ အမှောင်ထုထဲ က
လှပတဲ့ ကြယ်ပွင့် ကလေးတွေကို တော့ 
ဘာနဲ့ မှဖုံးကွယ်လို့ မရခဲ့ ပါဘူးလေ....။
တည်ထောင်ကြပါစို့ ......။ ။
( ရိုးမရှိုက်သံ ကဗျာစုမှ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:29 p.m. No comments: Links to this post
မော်ကွန်းမဲ့ သွေး ( ၁ )
ရှစ်ဆယ် ရှစ်လော... ။
ပန်းတွေကို လော... ။
( ထိုနယ်မြေ၏နောက်ဆုံးနေ့ များ ကဗျာစာအုပ်မှ )
မော်ကွန်းမဲ့ သွေး ( ၂ )
( အမှောင်တိုက်မှ ကဗျာများ၊ စာအုပ်မှ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:53 p.m. No comments: Links to this post
* ပန်းတို့ ၏၀ိညာဉ် များ *
စေစားမှူ့ မဲ့ ပန်းတို့ ရဲ့ သွေးသတ္တိသည်နီရဲ ကြောင်း
ထပ်လောင်းဖြည့် စွက်ရေးသားခဲ့ ပြီးသည့် နောက်
မှောက်ခဲ့ သည် သပိတ်
အတိတ်ကနောင်တော်တို့ ရဲ့ သွေး
ဆွေးမြည့် သည့် ခေတ်ဟောင်းအစက
ပြိုကြခဲ့ သည့် အဆောက်အဦး
အာဏာရူးတို့ ရဲ့ ရက် စက်ယုတ်မာမှူ့ 
အစုစု တို့ ကိုလက်စာခြေရန်အတွက်
ဒီတစ်ခါ အောင်မြင်ရမယ် တဲ့ 
ပန်းတို့ ရဲ့ ၀ိညာဉ် များ
ကြုံးဝါးထားကြလေတယ် ။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 5:18 p.m.3comments: Links to this post
လွတ်လပ်သော မြန်မာ စာပေ ရှင်သန် တိုးပွား ပါ စေ
မြန်မာ Blog တွေ တိုးပွား များပြားလာ တာဟာ
( ၁ ) နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာမျိုးဆက်တွေကြားထဲမှာ မြန်မာစာပိုမို
( ၂ ) ပြည်တွင်းပြည်ပရှိမြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းလည်း
အပြန်အလှန် ပိုမိုဆက်သွယ်ရိုင်းပင်းကူညီ နိုင်ခွင့် တွေရလာနိုင်တဲ့ အပြင်
( ၃ ) လက်လှမ်းမှီရာကလေးတွေလည်း အပြန်အလှန်နှီးနှော
ဖလှယ် မျှဝေကြတာ ပေါ့
( ၄ ) လွပ်လပ်သော မြန်မာစာပေ ရှင်သန်တိုးပွားရေး အတွက်လည်း အရေး ကြီးပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် အကန့် အသတ်မရှိပွင့် နေတဲ့ ဒီခောတ်ကြီးထဲ မှာ
သူယူ ၏ ။ ။
( အချို့ သောတပ်မတော်သားများသို့ သတိပေးချက် ) (အချို့ သော ကြီးမိုက် ကြံဖွတ် အဖွဲ့ ဝင် များသို့ )
( ၂၀ ရက် ၈ လ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးတော်ပုံ ဂျာနယ်မှ )
( ၁၂ ရက် ၁ လ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဒို့ ခွပ်ဒေါင်းစာစောင်မှ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 1:06 p.m. 1 comment: Links to this post
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 8:18 a.m.3comments: Links to this post
ကိုယ့် ကိုယ်ကို အရင်
ကိုယ့် ကိုယ်ကို အရင်သုံးသပ်ရတော့ မယ်...။ ။
( ထိုနယ်မြေ၏နောက်ဆုံးနေ့ များကဗျာစာအုပ်မှ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 8:02 p.m. 1 comment: Links to this post
သူ့ ဖက်ငါ့ ဖက်နဲ့ 
ဒို့ ရဲ့ ရန်သူ
ဘယ်မှာလဲ ....။ ။
(ဟင်္သာကိုးသောင်းပျက်စီကြောင်းကို ဖျားရောင်းဟင်္သာမပြုရာတည့် )
(တော်လှန်သတိ၊အတွင်းပတိပက္ခ အပြင်ပတိပက္ခ ခွဲခြားသတိထားကြစေလိုပါသည်။ )
အလျှောက် အနဲနှင့် အများအမှားနှင့် အမှန်ရှိကြမည်သာဖြစ်သည် အပြန်အလှန်
နားလည်မှူပေးကြပါစို့)
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:43 p.m. 1 comment: Links to this post
Bencher Paul Copeland honoured at reception for International
For his long-term work defending human rights, equality and social justice, bencher Paul Copeland was honoured byaspecial tribute atareception held in honour of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination on March 28, 2007.
"Tonight, the Equity and Aboriginal Issues Committee would like to take the opportunity presented by this special occasion to honour Paul Copeland for his exceptional commitment and support of human rights causes here in Canada, and internationally," Treasurer Gavin MacKenzie said. He noted that Paul has most recently been defending people charged under the Canadian anti-terrorism law and subjected to the national security process.
Asalarge screen beside the podium showed photos of Paul at various stages of his life, Paul's friends and colleagues reflected on his achievements and contributions. Speakers included bencher Carole Curtis; the Honourable Mr. Justice Melvyn Green, of the Ontario Court of Justice; Bush Gulati, of the Committee for Restoration of Democracy in Burma; and Timothy Zaw Zaw, of the Toronto Burma Roundtable. Bencher Joanne St. Lewis topped off the tribute witharendition of Mahalia Jackson's "I Live the Life I Sing About in my Song," which she chose after learning it has long beenasource of inspiration to Paul.
"Paul inspires me to beabetter lawyer every day," Carole Curtis said in her tribute.
In describing his longtime friend, Justice Green said, "Paul's enemies have always been the same: Injustice; Inequity; Tyranny; Bigotry; Oppression; Official Hypocrisy; and, of course, just plain Stupidity."
Bush Gulati from the Committee for the Restoration of Democracy in Burma spoke about the many years of passionate volunteer work Paul has done to help Burmese refugees and to support the Burmese community in Canada. "If we need him, Paul always responds; he is literallyaphone call or fax away."
Timothy Zaw Zaw, who came to Toronto in 1998 asaBurmese political refugee, said, "I too thank Paul for all his good work for us. We, the Burmese community, need more people like Paul to work to achieve democracy in Burma."
Paul spoke after hearing his friends' and colleagues' remarks. "I'm honoured, humbled and also stunned," he said, before speaking briefly about legal activism, the topic of the day. "Thank you to everyone for being here and to the Law Society for organizing this wonderful evening."
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 8:48 a.m. No comments: Links to this post
အရာရာကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ ဖို့ ကြိုးစားနေကြလေရဲ့ ..။
ယနေ့ ကမ္ဘာမှာအသုံးမတဲ့ အတွက်
အရှက်မဲ့ နိုင်ငံများအချင်းသာမိတ်ဆွေဖွဲ့ 
အရှေ့ နဲ့ အနောက်တံတိုင်းကာ
ဒါဟာ ယဉ်ကျေးမှူကိုထိမ်းသိမ်းတာတဲ့ လား..။
နယ်မြေစီးခြား တံတားပိတ်ဆို့ 
သူတပါး ပြည်တွင်းရေးမို့ ငါတို့ မျက်ရည်ချုပ်တီး
နှလုံးသားနဲ့ လူသားများခံစားနိုင်ပါ့ မလား....။
ဒီခေတ်မှာ မရှိသင့် တော့ ပါဘူး..။
ပိတ်ဆို့ ခြင်း တားမြစ်ခြင်း
ကန့် သတ်ခြင်း တွေမှာ
ယနေ့ ကမ္ဘာလူ့ ယဉ်ကျေးမှူအသိုင်းအ၀န်းမှာ
လက်မခံတော့ ပါဘူး ။
ကမ္ဘာအလယ်က ကန့် သတ်တိုင်းပြည်တခုဟာ
အတွေးခေါ် ပါ ကန့် သတ်ချုပ်ချယ်ထား
နောက်တန်းကို တွန်းပို့ နေတဲ့ စနစ်တခု ဆိုတာ
အာဏာလုယူထားသူတွေနားလည်ကြရဲ့ လား….။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 7:26 p.m. No comments: Links to this post
ဦးသန့် သို့ အမှတ်တရ
ထိုဓါတ်ပုံ ရှေ့ 
တမေ့ တ မော
ဂျီဏီဗာတွင် ( Geneva )
ထပ်ဆင့် ရှင့် ပြ
ဘ ဘ သန့် သည်
တပ်လှန့် နိုး ကြား
ကြိးမားမှတ်တိုင်ပါတကား ။ ။
( ခေတ္တ ဆွစ်ဇာလန် ) Oct 03, 1996
( UNHCR - Room XVII, NGOs Conference သို့ အမှတ်တရ
ဦးသန့်အား စိတ်မှန်းဖြင့် တောင်းပန်အပ်ပါသည်....
ယနေ့လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအရပ်ရပ် အရ တော့ 
ကမ္ဘာ မှာ မြန်မာ ပြန့် ရမယ် လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 4:44 p.m.2comments: Links to this post
ဂျာမဏီ ညများသို့ ....
ရဲရဲစွန့် ခဲ့ 
သူ့ ရဲ့ ပြည်သား
သူ့ လေး စား၏....။
( 1996, ဖရန့် ဖို့ ညများသို့ အမှတ်တရ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 1:28 p.m. 1 comment: Links to this post
ရေဆေးသန့် စင်ပြီးတဲ့ နောက်....
လတ်ဆတ်ကျန်းမာလာတဲ့ နေ့ ....
ငါမတွေ့ ချင်တော့ တဲ့ 
ငါမနေချင်ခဲ့ တဲ့ ဆေးရုံကြီပေါ်က
မ၀တ၀ ဓါတ်စာတွေကိုလွှင့် ပြစ်ရင်း
ငါပြန်လာခဲ့ ဦးမယ်လေ.....။ ။
( ထာဝရလမိုက်ညဒေသများသို့ အမှတ်တရ - ၂၁၊၈၊----)
ထိုနယ်မြေ၏နောက်ဆုံးနေ့ များ ကဗျာစုမှ
( လူသားတဦး၏ အမှားအမှန်သည်တော်လှန်ရေးစိတ်
ဓါတ်နှင့် ဆက်စပ်နေခြင်းမရှိ၊ လူသားသဘာဝလူပတ်
သည် ။ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 1:32 a.m.2comments: Links to this post
အဆင့် လျှော့ သွား
ဘယ်သူဖျက်ဆီးလိုက်တာလဲ ...။ ။
( လူနှင့် ရုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တို့ ၏အညမညဖြစ်စဉ်များကြားဉ် ရိုးသားခြင်းတို့ သည်မှေးမှိန်လာကြရလေပြီ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 12:28 a.m.3comments: Links to this post
7-July (သို့ ) သက်သက်မဲ့ မိုး
ဇွန်လ ၂၀ရက် ၈၈ ( RASU ) သက်သက်မဲ့ မိုးစီးရီးမှ
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:50 a.m.2comments: Links to this post
အုပ်ချုပ်သူနှင့်အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစား နှစ်ရပ်တွင် အုပ်ချုပ်သူတို့ ဖက်မှ
တရားမျှတမှူကင်းမဲ့ ကြီးထွားလာသည်နှင့် အမျှ ထက်မြက်တက်ကြွသော
ပြည်သူတို့ မှဦးဆောင်၍ ပြောင်းလွဲမှူတစ်ရပ် (၀ါ )တော်လှန်ရေး ဖြစ်
ပေါ်လာတပ်သည်မှာ မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ သမိုင်း နှစ်ရပ်စလုံးတွင်
ကမ္ဘာ့ သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်လည်း အဆမတန်အင်အား
ကြီးသော ယောမအင်ပါယာကြီးကို တော်လှန်ပြောင်းလွဲခဲ့ သောသာတက
များမှအစ ပြည်သူတို့ ၏ပြန်လည်ဒက်ခတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသောရိုမေးနီးသမ္မတ
ချောင်ဆက်စကူးတို့ အလည် နောက်ဆုံးအသေဆိုးဖြင့် သေခဲ့ ရသော
ဆာဒန်ဟူစိန်တို့ အဆုံး အာဏာရှင်တို့ ၏ဇတ်သိမ်းခန်း မတရားသောအစိုး
ရ၏ နေ၀င်ခန်းတို့ ကိုထင်ရှားစွာတွေ့ မြင်ကြရပေသည် ။
သတ္တိသွေးနီရဲ ရာတွင် ထူးခြားပြောင်မြောက်လှသော မြန်မာတိုင်းရင်းသား
အများစုသည် အင်္ဂလိပ်ဗြိတိသျှသာမကဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ အလည် တပါတီ
နှက်စွဲကိုင်ကာနည်းလမ်းပေါင်းစုံတို့ ဖြင့် အဆင့် လက်ဆင့်ကမ်း တော်လှန်အောင်
ပွဲခံခဲ့ ကြသည်မှာသမိုင်းအစဉ်အလာဖြစ်ပါသည် ။
ယနေ့ မြန်မာပြည်သူတို့ သည်လည်းထိုအစဉ်အလာကို ထိမ်းသိမ်းကာ ငြိမ်းချမ်းစွာ
လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြကြရာမှ လက်နှက်စွဲကိုင်တိုက်ပွဲများအလည် ယနေ့ ပြည်တွင်း
စစ်တိုက်ပွဲများအထိဖြစ်လာတော့ မြည့်အရေးသို့ ဦးတည်နေပေပြီ ။
ထားပါစေ၊ပြည်သူတို့ ၏စိတ်ထဲမှအမှန်တရားနှင့် မခံခြင်စိတ်များသည်ပြောက်ဆုံး
သို့ သော် ပြည်သူကိုချစ်သောပြည်သူများ၊အနစ်နာခံလူငယ်များသည် ပြည်သူတို့ 
ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှူံးမည့် နေရာများကို အတပ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားပြီး မြို့ တွင်းတိုက်ပွဲ
များ၊အာဏာရှင်တို့ ၏ပြစ်မှတ်များ၊၄င်းတို့ ၏လက်ပါးစေများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပြင်း
ထန်စွာတိုက်ပွဲဝင်သွားကြတော့မည်ကို တွေ့ ရှိရပေသည်၊
ယနေ့ အရှေ့ အလည်ပိုင်းဒေသလှုပ်ရှားမှူများ၊ အာဖရိကဒေသလှုပ်ရှားမှူများကိုကြည့် 
မည်ဆိုလျှင်လည်း မလွဲမရှောင်သာသည့် အဆုံး မြို့ တွင်းစစ် ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲများ
ကို ဆင်နွဲနေကြရသည်ကိုတွေ့ နိုင်ပါသည်၊ အချို့ နိုင်ငံများတွင်မြို့ တွင်းပေါက်ကွဲမှူများ
များပြားလာသဖြင့် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂတပ်များ၊နိုင်ငံတကာတပ်များ ပြည်တွင်းထဲအထိ
၀င်ရောက်ထိမ်းသိမ်းတားမြစ်စောင့် ကြပ်ပေးရသည်အထိဖြစ်လာပေသည် ။ကြားဝင်
မြန်မာပြည်သူအများစုဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများသည် သနားကျင်နာတပ်
ခြင်း ၊ အေးဆေးနိမ့်ချကာရောင့်ရဲတင်းတိမ်တပ်ချင်း ၊ သဘောထားကြီးခြင်း စသည့် 
နူးညံ့ သိမ်မွေ့ သောသဘောတရားများအပေါ်တွင် မြန်မာစစ်အာဏာရှင်များသည်
ချိမ်းခြောက်၊နိပ်စက်၊ရက်စက် ပြ၍ အနိုင်ကျင့် အုပ်ချုပ်ထားကြောင်းသဘောပေါက်
လာသော မြန်မာပြည်သူအများစုသည် ဖိလျှင်ချ ၊ထိလျှင်ချ ဟူသည့်နူတန်၏ physics
နိယာမ သဘောတရားနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသော တန်ပြန်မှူများကိုပြုလုပ်လာကြပေပြီ ။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အုပ်ချုပ်ဖက်မှသာ အာဏာလက်နှက်များဖြင့် တဖက်သတ်အနိုင်
ကျင့်လာနေရာမှပြည်သူတို့ မခံနိုင်သည့် အဆုံးမြို့ တွင်းလက်နှက်ကိုင်ဆန္ဒပြသောပြောက်
ကြား ဖေါက်ခွဲရေးများပါ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်မှာ မတရားအာဏာလုအုပ်ချုပ်သူနေသူ
ဖိနိုပ်ခြင်းကြောင့် ကြောက်ရွှံ့စွာရပ်တမ်းကရပ်သွားကြမည်မဟုတ်ပဲ
ပိုမို နီစွေးသောသွေးများဖြင့် ဒေါသအိုး ပေါက်ကွဲကြဖို့ သာရှိလာနိုင်ပါသည်
ယနေ့ ထက်မျက်သော မြန်မာပြည်သူတို့ မခံနိုင်သည့် အဆုံး
ဒေါသအိုး ပေါက်ကွဲ ကြသော ပြရုတ်များသည် ယနေ့ ပြည်တွင်းရှိအချို့မြို့ များတွင်
ငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှူများမအစ ၊ နယ်စပ်လက်နှက်ကိုင်တိုက်ပွဲများအလည်
မြို့ တွင်ဗုံးပေါက်ကွဲမှူများ ၊ ပျောက်ကျားစစ်များ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဦး
မည်ကို ၀မ်းနည်းစွာတွေ့ မြင်ရပါသည် ။
မြန်မာပြည်၏ စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးကို လက်နှက် အာဏာဖြင့် တဖက်သတ်ထိမ်း
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:44 p.m. No comments: Links to this post
အဆုံးအဖြတ်ခံမှာလဲ ....။ ။
သို့ သော် ထိုအချိန်ထိုနေရာထိုဒေသရှိ အများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာလေးစားလိုက်နာသင့်
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:09 p.m. No comments: Links to this post
ငဲ့ ကွက်နေရမှာလဲ ...
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 2:12 p.m. No comments: Links to this post
တစစီလွှင့် ချွေ တပ်ပါသည်။
သူမပျော်မွေ့ ဘူးပါသည် ။
သူ့ အားတောင်းဆုပြုပါသည် ။
( ရိုးမချောင်းခြားဘ၀တပါးမှ သူမသို့ )
ရိုးမချောင်းခြားဘ၀တပါးမှ သူမသို့ 
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 3:00 p.m.4comments: Links to this post
ကဲ ကဲ ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်....။
မကြည့် လည်းမကြည့် 
ခဲ နဲ့ ပါလား...။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:03 p.m. 1 comment: Links to this post
ဆင်းခဲ့ ပါတော့ ....
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:58 p.m. No comments: Links to this post
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 8:03 p.m. 1 comment: Links to this post
Bencher Paul Copeland honoured at reception for In...